Voina nampisaraka fianakaviana :: Niara-maty izy mianaka sy ireo kambana enim-bolana tao am-bohoka • AoRaha
Voina nampisaraka fianakaviana Niara-maty izy mianaka sy ireo kambana enim-bolana tao am-bohoka
Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina tetsy Ikianja Ambohimangakely, ny harivan’ny alakamisy 14 novambra 2019 lasa teo. Mpianaka sy zaza kambana enim-bolana tao am-bohok’ilay tovovavy no indray nindaosin’ny fahafatesana. Teny an-dalana hody avy naka mpianatra nirava izy dimy mianaka no tra-doza.
Tampoka ny loza, nefa tombanana ho vokatry ny tsy fitandreman’ ny hafa amin’ny hafainganam-pandeha mihoatra ny tokony ho izy. Lasibatry ny lozam-pifamoivoizana mahatsiravina ireto mpianaka, samy vehivavy, 19 taona sy 42 taona, izay indray namoy ny ainy rehefa voadonan’ny fiara marika Mercedes Sprinter teny Ikianja Ambohimangakely, tamin’ny alakamisy 14 novambra hariva.
Mitondra vohoka enim-bolana, ary efa fantatra fa kambana, ilay tovovavy, zanany. Tsinapan’ny mpitandro ny filaminana nizaha ifotony ny zava-nitranga ny tsy fahafehezan’ilay mpamily ny familiana noho ny fandehanana mafy. Nivadika tany amin’ny sisin’arabe mihitsy io fiara nanao loza io, teo amin’ny fiolahana iray sy taorian’ny nanitsiany tamin’izy mianaka.
Dimy mianaka izy ireo no tafara-dia, fa soa fa nieren-doza ireo telo mianaka hafa. Maty tsy tra-drano i Menjarimalala Laurencia, ilay mitondra vohoka kambana enim-bolana. Tonga teny tamin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona na Hjra, fotoana fohy monja, vao nodimandry i Michaut Miraille, ilay renim-pianakaviana.
Avy naka ny zanany fara­lahy, nirava avy nianatra, itsy farany niaraka tamin’ny vadiny sy i Menjarimalala Laurencia, zanak’izy ireo vavimatoa, ilay namoy ny ainy teo no ho eo ary ny vehivavy mpanampy iray, tamin’io alakamisy 14 novambra 2019 hariva io. Nifanao aloha sy aoriana izy dimy mianaka teny an-tsisin-dalana. Avy ny orana tamin’io fotoana io.
Tazan’izy dimy mianaka tsara ny fiavian’ilay fiara marika “Mercedes Sprinter” miloko fotsy, izay somary nandeha mafy, araka ny filazan-dRakotomalala Rijaniaina, vadin’iry renim-pianakaviana maty. Tao anatin’ny fahakiviana tanteraka no niezahany nitadidiany ny zava-doza niseho. I Michaut Virginie, rahavavin’i Michaut Miraille, no nanaiky niresaka sy tena nitantara ny fisehoan-javatra. Naneho ny alahe­lony tamin’ny fifampiresahana tamin’ireo tompon’ny fiara taorian’ny loza izy..
Nandeha mafy sady nivilavila ny fahitany ny fandehan’ilay fiara marika “Mercedes Sprinter”. “Hafahafa be anie ry Dada izany fandehan’ity fiara tamy ity izany, hoy i Menja”, hoy indray ny fitan­taran-dRakotomalala Rija­niaina, tamin’ny fianakaviana, raha namerina ny resaka nifanaovany tamin’ itsy zanany faralahy, talohakelin’ny fitrangan’ny loza.
Nanitsy tamin’izy dimy mianaka, izay nanaraka ny sisin’arabe, ilay fiara. Nihorirana niala ny fiara fotsiny Rakotomalala Rijaniaina ka izay no tsy nahavoadonan’ny fiara azy. Ny mpanampiny sy ny zanany faralahy, ilay notsenaina tany am-pianarana, kosa nitsoaka sady nitsambikina nandingana ny tatatra. Izy mianaka, samy vehivavy, no voadona mafy sady tsy tana ny ainy. Fantatra fa mbola nahavita niresaka sy nitaraina tamin’ny vadiny, teny an-dalana hamonjy ny hopitaly Hjra, ilay renim-pianakaviana.
Nivadika indroa itsy fiara nanao loza vao tafajanona. Olona fito mianaka ny tao anatin’io fiara io, araka ny tatitra nataon’ ny Zandary avy ao Ambohimangakely. Nentina tao amin’ny hopitaly tao Ambohimangakely i Michaut Miraille. Tsy nijanona ela tao fa nasaina nampiakarina haingana tamin’ny hopitaly lehibe teto an-drenivohitra. Fiara tsy mataho-dalana an’olona tsara sitrapo no nitondra azy ireo.
Telo mianadahy no mpiray tampo ry Michaut Miraille ka izy no vavimatoa. Niteraka telo mianadahy izy sy ny vadiny. Io namoy ny ainy niaraka taminy nandritra ny loza teny Ikianja io no vavimatoa.
“Nahazo antso tamin’ny namana aho fa tratran’ny lozam-piarakodia eny Ambohimangakely ny zokiko vavy. Eny amin’ny hopitaly no nasainy nivantana fa tsy hahatratra azy ireo eny Ambohimangakely intsony aho”, hoy Michaut Virginie, zandrin’i Michaut Miraille, mitantara ny fahatairany sy ny fihetsiny izay saika tsy naharay lamba.
Niandry fotoana vitsivitsy i Michaut Virginie, vao tonga teny amin’ny Hjra ny fiara tsy mataho-dalana miloko fotsifotsy nitondra ny zokiny vavy naratra. “Tsy hitako izay natao rehefa nahita ny zokiko efa tsy nahatsiaro tena intsony. Niforitra tamin’ny seza afara kanefa tapa-tongotra sy marary maoja. Mbola nitaraina tamin’ny vadiny, hono, izy teny an-dalana fa marary azy ny lamosiny. Tsy reny akory ny tongony havanana tapaka tarangana. Teo amin’ ny antsasak’adiny dia tapitra ny ain’ny zokiko”, hoy i Michaut
Virginie, nitanondrika sady nijery ny findainy misy ireo sarim-pianakaviana.
Nentina nody avy hatrany teny an-tranony, teny Ambovokely Ikianja Ambohimangakely, ny nofo mangatsiakan’ i Menjarimalala Laurencia, izay nitondra zaza kambana enim-bolana am-bohoka, raha ny filazan’ny fianakaviana. Nanamafy ny tatitry ny Zandary momba ny loza namoizany ny rahavaviny sy ny zana-drahavaviny ity renim-pianakaviana ity. Notorohany ny fisian’ny fanaovana tsinontsinona ny fahafatesan’ izy mianaka.
Mafy amin’ny fianakaviana ny famoizana azy mianaka tao anatin’ny indray mipi-maso, niampy ny faha- fantarana fa efa mitondra vohoka kambana i Menjarimalala Laurencia. Efa tsy lavitra ny fotoana hikasana hanaovana ny fisoratam-panambadian’ity tovovavy sy ny fofombadiny, amin’ny volana desambra ho avy io. Vao tamin’ny faramparan’ ny volana oktobra lasa teo no nisy fihaonana farany teo amin’ny mpiray tampo amin-dry Michaut Miraille.
Isan’ireo mpanafana ny koràna isaky ny misy fivoriam- pianakaviana i Miraille. “Amin’ny maha zoky azy dia izy no mpandamina raha misy ny olana. Raha misy koa ny tsiambaratelo resahanao aminy dia azo itokisana tsara izy. Olona tia fivavahana iny zokiko iny. Misy fotoana fotsiny izy no somary kizi­tina fa miserana ihany izany”, hoy i Michaut Virginie, nisento lalina tamin’ ny fahalasanan’ny zokiny, izay solon-dray aman-drenin’izy ireo izay efa nodimandry avokoa.
Hatreto, mbola tsy nisy ny hevitra tapaka ny amin’ny hitohizan’ny raharaha ny fianakaviana. Naleo aloha nangina mba tsy hampihetsika ny alahelon’izy mianaka navelan’ny maty. “Mbola tsy nisy fihaonana mihitsy taorian’iny loza nahatsiravina iny, fa mbola hifamory izahay mianakavy. Na ny hifanatri-tava amin’izy mianaka aza mbola tsy tantiko. Mafy loatra ilay “dona” ka mila maka saina kely aloha ny fianakaviana. Mbola tsy nifampiresaka tamin’olona hafa ihany koa izahay”, hoy Michaut Virginie raha nantsoina tamin’ny antso an-tariby.
Nalevina tany Ambohibao Atsimo Ambohimanga Rova ny nofo mangatsiakan’ izy mianaka lasibatry ny lozam-pifamoivoizana ireto.
Lozam-pifamoivoizana :: Niharan’ny tambabe, ny mpamily nahadona mpanao praopagandy
Vono olona :: Enin-dahy sy vehivavy iray voatazon’ ny polisy any Ambalavao